Maroc x Skunk mbeu | MyWeedSeeds.com
Mhedzisiro: sativa yakakwira cerebral buzz
Maroc x Skunk mbanje is a indica sativa musanganiswa unoburitsa simiti ine simba kwazvo, yakaita sehuze. Iye anongokura 30 kusvika 60 masentimita kureba, asi anoshamisa zvine mutsindo uye ane yakakwira THC nhanho. Iwe unogona kutarisira kuti chirimwa chimwe chete chibereke zvakapoterera gumi nemana kusvika gumi neshanu maunzi ... 14 kusvika 16 magiramu eakasarudzika uye anotyisa masora pa cubic mita. Maroc x Skunk inorondedzerwa semoderataly iri nyore kukura, kwete sarudzo yakanakisa yemapipi. Kana iwe uri murimi ane ruzivo, unogona kumuita kuti abudirire mukati meimba kana kunze. Nguva yake yekutumbuka ingangoita mavhiki masere, saka kana iwe uchikura iye kunze kwekukohwa unenge wave mukupera kwaGunyana. Maroc x Skunk ine yakasarudzika, maroc kuravira. Kunaka kwake kwakanyanya hash-senge. Kukwirira kwake ndokwechokwadi kwaari sativa genetics, akasimudzwa, cerebral, akafuridzirwa. Iwe unenge uine kujekeswa pfungwa uye kunyemwerera pachiso chako.